Ahoana ny fanovana ny famandrihana Apple amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny iTunes | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fanovana ny famandrihana Apple avy amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny iTunes
Ruben gallardo | | iTunes, Tutorials
Efa nisoratra anarana amin'ny serivisy amin'ny Internet ve ianao ary inona no fitantananao amin'ny alàlan'ny Apple? Te hahafantatra ve ianao rehefa mifarana ny famandrihana isan-taona? Te hanova ny fombafomba nifanarahana ve ianao? Te hanafoana ny fisoratana anarana ve ianao? Izany rehetra izany azonao atao amin'ny Mac izany amin'ny alàlan'ny iTunes.
Apple Music, iCloud Drive, famandrihana fampiharana; sns. Ireo fifanakalozana rehetra ireo dia voarakitra ao amin'ny Apple ID anao. Ary afaka mitantana araka izay itiavanao azy ianao. Mazava ho azy fa mila mandalo iTunes foana ianao na raha mihetsika ianao, amin'ny alàlan'ny fitaovana misy iOS na amin'ny alàlan'ny Apple TV. Amin'ity tranga ity dia holazainay aminao ny fomba fanaovana azy amin'ny alàlan'ny solosainao Mac. Ary ireo no dingana tsy maintsy raisinao hahitana ny famandrihanao sy hanatanterahana ireo hetsika ilainao.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mandefa iTunes. Rehefa miditra ianao dia mety efa tafiditra miaraka amin'ny anaranao sy ny tenimiafinao. Ankehitriny, hojerenao amin'ny dingana manaraka. Ary tsy maintsy mankany amin'ny bara fisakafoanana ianao ary tsindrio ny «Account». Ao amin'ny menio mitete-midina mitady ny safidy «Jereo ny kaontiko ...» ary kitiho eo.
Ho avy izao ny fotoana hijerena raha toa ka tafiditra na tsia ny antontan-taratasinao. Raha tsy izany dia mila mahazo antoka ianao fa ny Apple ID izay miseho dia anao ary ampidiro ny teny miafina mifanaraka aminy. Amin'izay fotoana voafaritra tsara izay dia hampidirinao ny antsipirian'ny kaontinao Apple: adiresy faktiora, nomeraon-telefaona mifandraika amin'ny kaonty, fomba fandoavam-bola ary tarehimarika amin'ny carte de crédit - raha ilaina -, ny tantaran'ny fividianana vao haingana ary raha manohy midina bebe kokoa ianao hanana fizarana antsoina hoe «Settings» ianao. Ao anatin'izany dia misy submenu hiseho ao izay "Famandrihana" ary ny isan'ny fisoratana anarana misy amin'izany fotoana izany dia holazaina aminao. Amin'ny lafiny ankavanana dia hanana safidy ianao "Mitantana". Tsindrio izany.
Rehefa miditra ao ianao dia hanana ny serivisy nifanarahana rehetra. Eny, rehefa miditra tsirairay amin'izy ireo -Apple Music amin'ny sary ambony-, hahafahanao manova ny drafitra nifanarahana; havaozy ny ankehitriny; fantaro rehefa tapitra ny vanim-potoana iainanao na ajanony ny fisoratana anarana amin'ny manaraka. Tsotra toy izany. Ny dingana manaraka dia miankina aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fanovana ny famandrihana Apple avy amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny iTunes
Tokony hiala ve ny mini Mac, AirPort ary iPod Touch?